शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा विद्यालयमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ ःजिसस उपप्रमुख भूषाल
कौरव खत्री,गुल्मी १७ माघ ।
बागलुङको बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. ५ स्थित पौदीटारी आधारभूत विद्यालयको ४५ औ बार्षिकउत्सव विविध कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विहिवार बार्षिकउत्सवको उद्घाटन गदै प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङका उपप्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयमा राज्यले भौतिक पुर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए ।
विहिवार पौंदीटारी आधारभुत विद्यालय बडिगाड गाउँपालिका ५, ग्वालीचौरको ४५ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै उपप्रमुख भुसालले सो कुरा बताएका हुन ।
साथै भुसालले पांैदीटारी आधारभुत विद्यायल शैक्षिक सुधारमा अगाडी बढि सकेको भन्दै नमुना विद्यालय वन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए । त्यस्तै उनले अंग्रेजी माध्ययममा पढाइ हुने सो विद्यालयको प्रशंसा गर्दै भुसालले अरु विद्यालयलाई पनि गुणस्तर वृद्धिमा लाग्न आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा कार्यक्रममा वडिगाड गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष अर्जुन खरेल, भानु माध्यमिक विद्यालय टारीका प्रधानाध्यापक केशव खरेल, आयोजक विद्यालयका पूर्व प्रअ तिर्थमणी भुसाल,जनज्योती मावि अरेवाका इश्वरी आचार्य, चन्दादाता शिवलाल आचार्य, स्वयंसेवक शिक्षकहरु इडिबेल्चर र अन्ना लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा चन्दादाता, सहयोगी, अतिथि लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक टिका बहादुर भुजेलले ५३ लाख ३५ हजार बरावरको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
साहीे कार्यक्रममा अन्तरसदनात्मक मार्चपास तथा पि.टि. प्रदर्शन, अभिभावकहरुको कुर्चि दौड लगायतका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत गित तथा विचविचमा सो नृत्य सहित विविध विद्यार्थीहरुको प्रतिभाहरु प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा विजेता हुनेहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । सोही अवसरमा विद्यालयको लागि सहयोग पर्ने सहयोगी र पत्रकारहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।